Qalbi Dhagax wuu ka na siib badnaa Musri Iyo Khashaqji. – KHAATUMO NEWS
Qalbi Dhagax wuu ka na siib badnaa Musri Iyo Khashaqji.
Inkastoo Mursi la afganbiyey 2013kii hadana Qalbi Dhagax waxaa la dhiibay 2017kii , Khashaqjina waxaa la khaarajiyey 2018kii, sidaas oo ay tahay ayaa sadexdoodu kala nasiib badnaayeen.
Khashaqji miiska ayaa lagu googooyey oo dadkii dhibsaday ay ixtiraami waayeen heshiisyada caalamiga ah ee dublumaasiyada, ilaa maantana kuwii dilay aan wax talaabo ah laga qaadin adduunkuna uu toos ah u daawanayey dulmiga iyo danbiga laga galay bani’aadannimada. Ilaa maanta in madaxdii dilkaas gaysatay aan waxna laga qaban karin lana soo taagi karin cadaalada, waxaaba la raadiyaa sidii loola kulmi lahaa dhaqaalana looga heli lahaa, Ardogan wuxuu sheegay in Malaayiin dollar diyaar loo yahay in lagu bixiyo sidii xaqa Jamaal Khashaqji loo duudsiyi lahaa, Jamaal wuxuu calaamad u yahay Asxaabul Ukhfuudka qarnigan.
Mursi isagu 6 sano oo ciqaab iyo cadaab ah ayuu ku qaatay xabsiga oo inqilaabkiisii lagu bixiyey Balaayiin Dollar oo tacsidiisii lagu kala dhuuntay, isaguna ciqaab iyo cadaab loo qadac miisay ayuu 6 sano qol yar kaligii ku dhamaystay.
Qalbi Dhagax waxaa isagana gacanta loo galiyey cadowgii ay is hayeen, laakiinse Qalbi Dhagax wuu ka nasiib badnaa Jamaal iyo Mursi Ilaahay hawnaxariistee labadoodabee, dhinaca qof aan teelo loo dhigan way ka sinaayeen , laakiin dhacdooyin mucjisooyin ah oo ka dhacay Itoobiya ayaa shinbir looga soo dhigay, Wiilashii reer Oromo ee mudaharaadka joogtada ah wadey waxay xoreeyeen rag badan oo xabsiyada sida Mursi ku geeriyoon lahaa. Qalbi Dhagaxna xilligan wuxuu abaal u hayaa Abiy Axmed oo xabsiga ka sii daayey.
Xilliga arrimahani dhacayaan waa qarnigan aan ku noolahay maaha Qisooyinkii Qur’aanku inooga waramay iyo Asaadiirtii hore ee waa hadda oo intan oo dhacdo ah aan wax mala awaal ah iyo Israa’iiliyaat toona ku jirin.
Intan oo dhacdo dadkii geystay dalalkooda wadaniyiin ayey ka yihiin madaxdii talaabooyinkan qaadayna waxay haystaan afku leeb layaal ku difaaca sax iyo khaladba, muwaadinka Soomaaliyeed ma dhiibo walaalkiisa Soomaaliyeed, haddii khalad ka dhacana Waa kii qirtay ilaa hadda xukuumaddii Soomaaliyeed ee ONLF iyo Qalbi Dhagax ku sheegtay Argagixiso si rasmiya oo u dhiganta sidii u afka xunbada uga tuurayey Yariisow markuu ahaa Wasiirka warfaafinta ugama bixin raali galin, laakiin Dhammaan xukuumaddii walina waa joogtaa waana halyeeyo qaran.
Previous Post: Deg Deg Daawo:Muuse Biixi Oo Si weyn loogu Soodhaweeyay Dalka Gini (Guinea)
Next Post: Maxay Ku Midooben Khayre iyo Mahad Salaad